Erol Akbay: Sesifikile Isikhathi Sokujabula Kuqembu leHighlanders
Iqembu lenguqu ele Highlanders lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside liqhuba nzima esigabeni se Castle Premier Soccer League lapho libhaxabula ele Chicken Inn nge 4 ka nya ngeSonto.
Limpumela ibingalindelwanga ngabalandeli bomdlalo wenguqu abanengi njalo umqeqetshi waliqembu uErol Akbay uthi yisifiso sakhe ukuba isikhathi sokuhlala bekhala ezimathonsi sibe sesidlulile.
“Ngilethemba ngokunqoba kwethu sihle sesula umnyama ebesilawo okuzakwenza ukuba sinqobe kumidlalo yethu elandelayo. Ngibatshelile abafana namhla ukuba asisenelisi ukunqoba kuloba yiphi inkezo ngalapho esikhona ngathi sekumele omunye lomunye azidlalele ngoba umnyaka usiyaphela ama contract ayaphela ngakho kumele badlale kuhle ukuze bathole njalo ithuba elokuba bedlalele iqembu le Highlanders ngomnyaka olandelayo.”
Iqembu le Highlanders likhuphuke layahlala endaweni yetshiyagalo mbili lilemiklomelo engamatshumi amathathu lesikhombisa kuthi ukunqotshwa kwele Chicken Inn kutsho ukuba selitshiywe ngemiklomelo emihlanu liqembu elihlezi phezu kwengalane ele Dynamos.
Iqembu le Dynamos lilemiklomelo engamatshumi amahlanu lesithupha njalo linqobe ele Harare City nge 2 ka 1 ngeSonto. Endaweni yesibili kuleqembu le Ngezi Platinum elilemiklomelo engamatshumi amahlanu lantathu okulinani eliphethwe liqembu le FC Platinum.
Ngaphansi kwengalane ikhuba liyala lilokhu litshona kuqembu le Bantu Rovers lona elinqotshwe nge 3 ka 1 nge Shabanie Mine ngeSonto kodwa njengoba kusasele imidlalo eyisikhombisa ukuba imidlalo iyefika emaphethelweni lalo libalelwa kumaqembu alakho ukusinda ekugunyulweni.
Amaqembu ahlezi emsileni wengalane ngemva kwemidlalo yeviki lamatshumi amabili lesikhombisa ngabalisa ele Tsholotsho, ele Hwange kanye lele Shabanie Mine kodwa kahle kahle wonke nje amaqembu angakafikisi imiklomelo engamatshumi amahlanu lanye asengozini eyokugunyulwa kusigaba saphezulu ngoba elihlezi kundawo yesine usuka ngaphansi ele Shabanie lilemiklomelo engamatshumi amathathu.
Isimo sengalane yemiklomelo siveza ukuba amaqembu ahlezi endaweni ezine eziphezulu abalisa ele Dynamos, ele Ngezi Platinum Stars, ele FC Platinum Kanye lele Chicken Inn yiwo kuphela asefikise imiklomelo engamatshumi amahlanu lanye.